မိန္းကေလးအခ်ိဳ႔ သစၥာေဖာက္ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား – Trend.com.mm
သင့္ေကာင္မေလး ေဖာက္ျပန္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းေတြကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ရင္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတည္းေၾကာင့္ မဟုတ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ မိန္းကေလးေတြ လက္ရွိခ်စ္သူအေပၚ ဘာျဖစ္လို႔ ေဖာက္ျပန္ရတာလဲ၊ သူတို႔ကို ဘယ္လိုထိန္းသိမ္းရမလဲဆိုတဲ့ နည္းလမ္းေကာင္းေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
ဘယ္လို ထိန္းသိမ္းမလဲ ?
သင့္ခ်စ္သူမိန္းကေလးအတြက္ သင္အျမဲရွိေနတယ္ဆိုတာကို ျပဖို႔အတြက္ အလြယ္ကူဆံုးနည္းလမ္းကေတာ့ သူမအနားမွာ တတ္ႏိုင္သမွ် ရွိေနေပးဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူမ စကားေျပာတဲ့အခါ မ်က္လံုးကို ေသခ်ာၾကည့္၊ နားေထာင္ၿပီး စိတ္၀င္စားတက္ၾကြစြာနဲ႔ ေမးခြန္းေတြ ျပန္ေမးေပးပါ။ ဒါ့အျပင္ တစ္ခါတစ္ေလမွာ သင္မလုပ္ခ်င္တဲ့အရာေတြကိုလည္း သူမအတြက္ လုပ္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဥပမာ – ေအးေအးေဆးေဆး ရုပ္ရွင္သြားၾကည့္ခ်င္ေပမယ့္ သူမအနဲ႔အတူ ေစ်း၀ယ္တာလိုက္ေပးတာမ်ိဳး၊ ဘယ္မွမသြားခ်င္ေပမယ့္ သူမနဲ႔အတူ တစ္ေနရာရာကို အေဖာ္လိုက္ေပးတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္တစ္ေယာက္က သင့္ထက္ ပိုေခ်ာလို႔၊ ပိုၾကည့္ေကာင္းလို႔ သင့္ကို ထားသြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အိပ္မက္ဆိုးတစ္ခုပါပဲ။ ဒါမ်ိဳးက ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္တစ္ေယာ္ကရဲ႕ ဆြဲေဆာင္ျခင္းခံရတာက လူသားဆန္မႈရဲ႕ တစိတ္တပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္ အရမ္းလည္း မစိုးရိမ္ပါနဲ႔။ ရုပ္ရည္သြင္ျပင္ဆိုတာက မ်ိဳးဗီဇနဲ႔ဆိုင္ပါတယ္။ သင္ေျပာင္းလဲခ်င္တိုင္းလည္း ေျပာင္းလဲလို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ရုပ္ရည္သြင္ျပင္က ဒီကိစၥမွာ အဓိကက်တာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ မ်ားေသာအားျဖင့္ မိန္းကေလးေတြဟာ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ဆြဲေဆာင္မႈရွိတယ္လို႔ ထင္ေနဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ သူမရဲ႕ ရုပ္ရည္ကို အသိအမွတ္မျပဳဘူးဆိုရင္၊ သူမကို ဆြဲေဆာင္မႈရွိေၾကာင္း မေျပာဘူးဆိုရင္ ဒီလိုေတြေျပာတတ္တဲ့ အျခားတစ္ေယာ္က္ုိ သာယာတာ မထူးဆန္းပါဘူး။ သူမကို ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မယ္၊ ကဲ့ရဲ႕မယ္ဆိုရင္ ပိုဆိုးပါတယ္။
သင့်ကောင်မလေး ဖောက်ပြန်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကို ဆန်းစစ်ကြည့်ရင် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုတည်းကြောင့် မဟုတ်နိုင်ပါဘူး။ ဒီတော့ မိန်းကလေးတွေ လက်ရှိချစ်သူအပေါ် ဘာဖြစ်လို့ ဖောက်ပြန်ရတာလဲ၊ သူတို့ကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းကောင်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းမလဲ ?
ဒီအချက်ကို မရှင်းခင်မှာ သူမအတွက် ရှိနေတယ် ဆိုတာရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို နားလည်ဖို့ လိုပါတယ်။ ချစ်သူရည်းစားဖြစ်လာပြီဆိုရင် တစ်ယောက်အတွက် တစ်ယောက်အပြန်အလှန်ရပ်တည်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အခက်အခဲတွေကြုံနေရချိန်တွေဆိုရင် သူမအနားမှာ ရှိနေပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလို ရှိနေပေးတာက သူမအတွက် လုံခြုံစိတ်ကို ဖြစ်စေပြီး အားပေးကူညီရာလည်း ရောက်တဲ့အတွက် အရေးကြီးပါတယ်။
သင့်ချစ်သူမိန်းကလေးအတွက် သင်အမြဲရှိနေတယ်ဆိုတာကို ပြဖို့အတွက် အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကတော့ သူမအနားမှာ တတ်နိုင်သမျှ ရှိနေပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမ စကားပြောတဲ့အခါ မျက်လုံးကို သေချာကြည့်၊ နားထောင်ပြီး စိတ်ဝင်စားတက်ကြွစွာနဲ့ မေးခွန်းတွေ ပြန်မေးပေးပါ။ ဒါ့အပြင် တစ်ခါတစ်လေမှာ သင်မလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုလည်း သူမအတွက် လုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာ – အေးအေးဆေးဆေး ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ချင်ပေမယ့် သူမအနဲ့အတူ ဈေးဝယ်တာလိုက်ပေးတာမျိုး၊ ဘယ်မှမသွားချင်ပေမယ့် သူမနဲ့အတူ တစ်နေရာရာကို အဖော်လိုက်ပေးတာမျိုးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ကို ယုံကြည်သည်ဖြစ်စေ၊ မယုံကြည်ဘူးဖြစ်စေ မိန်းကလေးတွေက သံသယများတတ်ပါတယ်။ တကယ်လို မယုံကြည်ဘူးဆိုရင်တော့ မိန်းကလေးဖက်က အရမ်းခံစားနေရမှာပါ။ သံသယတွေ များလာတဲ့အခါမှာ စိတ်မလုံခြုံမှုတွေ၊ ဒေါသတွေနဲ့ မခံချင်စိတ်တွေ ပြည့်လာတတ်ပါတယ်။ ဒီခံစားချက်တွေကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ နောက်တစ်ယောက်ကို ရှာလာတတ်ပါတယ်။ ယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးပြီး သံသယများလာတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကလည်း အများကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး ရန်ဖြစ်စကားများကြတာ၊ တစ်ခုခုဆိုရင် သူမကို အလိုမကျဖြစ်နေတာ၊ အခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့တာ စသဖြင့် အများကြီးပါ။ ဒီလို သံသယတွေများလာတဲ့အခါမှာ သင့်နားကတွေ ဝေးဝေးကို သွားတာက သူမအတွက် ပိုမိုခံစားရသက်သာစေပါတယ်။
နောက်တစ်ယောက်က သင့်ထက် ပိုချောလို့၊ ပိုကြည့်ကောင်းလို့ သင့်ကို ထားသွားမယ်ဆိုရင်တော့ အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုပါပဲ။ ဒါမျိုးက ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်တစ်ယော်ကရဲ့ ဆွဲဆောင်ခြင်းခံရတာက လူသားဆန်မှုရဲ့ တစိတ်တပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ် အရမ်းလည်း မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်ဆိုတာက မျိုးဗီဇနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ သင်ပြောင်းလဲချင်တိုင်းလည်း ပြောင်းလဲလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရုပ်ရည်သွင်ပြင်က ဒီကိစ္စမှာ အဓိကကျတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ များသောအားဖြင့် မိန်းကလေးတွေဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ ထင်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ သူမရဲ့ ရုပ်ရည်ကို အသိအမှတ်မပြုဘူးဆိုရင်၊ သူမကို ဆွဲဆောင်မှုရှိကြောင်း မပြောဘူးဆိုရင် ဒီလိုတွေပြောတတ်တဲ့ အခြားတစ်ယော်ကို သာယာတာ မထူးဆန်းပါဘူး။ သူမကို ပြစ်တင်ဝေဖန်မယ်၊ ကဲ့ရဲ့မယ်ဆိုရင် ပိုဆိုးပါတယ်။